सल्यान गेटका बिषयमा जिल्लाका नेतृत्व तथा नेताहरुलाई प्रश्न ?
आखिरी यस्तो राजनिती किन हुँदै छ एउटा जाबो गेटमा ??
जिल्लाका नेतृत्व तथा नेताहरुलाई पनि यो कुरा नपचेकै हो कि ?? खासै यस विषयमा कसैले पनी चासो दिएको पाइन । के जिल्लाका युवाहरूले जिल्लाको लागि केही गर्छौ भनेर आट देखाउनु सानो कुरा हो र ? जिल्लाप्रतीको एङ्गलबाट हेर्दा यो त शानको कुरा होइन र - यसरी युवाहरुले आफै गर्छौ भन्नू !!
कि गेट भन्ने कुरो झिनो सानो कुरो भएकोले तपाईंहरुले चासो नदिनु भएको हो ?? यदी यो झिनो सानो नै कुरा हो भने एउटा गेट बनाउन पनि किन यति बिध्न राजनिती चल्दै छ - बिचार गर्नुस त । सबलाई थाह भएकै कुरो हो हामी युवाहरूले गेट बनाउनु पर्छ भनेर अभियान चलाएसी मात्रै सल्यान गेटले चर्चा पाएको थियो । कागजी रुपमा पहिला के कति योजना कोरीए के कति बजेट छुट्याइया थ्यो ?? केके प्राबधिक कुरा मिल्या थिएन त्यो जनतास्तरले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । जे होस हामिले सल्यान गेट भोलेन्टेरेली एउटा जिल्लालाई चिनो स्वरुप सल्यान गेट बनाउछौ भनेर पहिले नै धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो । उत्साहजनक साथ र सहयोग प्राप्त हुँदै आएको थियो र छ पनि । पहिले नै युवाहरुले गेट बनाउन लाग्दैछन भन्ने कुरा थाह भएर पनि युवाहरूलाई आखिरी बाइपास किन गरिदै छ ?
कि हामी बनाउन सक्दैनौ जस्तो लाग्यो ?? हामिले उठाएको पैसा उहाँहरुलाई दिएसि उहाँहरुले बनाउने अरे । आखिरी किन युवाहरुको जिल्ला प्रतीको जोश माथी तुसारापात गर्न खोजिदै छ ?? जसले छुट्टै गेट बनाउछु भनेर बजेटसम्म छुट्याइसक्नु भएको छ - उहाँले त हामी युवाहरूले मात्रै बनाउन दिने त कुरै छोडौ मिलेर बनाऔं भन्दा समेत किन संतोषजनक जबाफ दिनुहुन्न ?? किन हामीले जिल्लाको लागि केही योगदान दिन चाहिरहेका छौ भन्दा पनि हामीसंग प्रतिस्पर्धात्मक भावना राखिदै छ त ??
सल्यानका समस्त राजनितिक दलका नेता तथा नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न ?? सोच्नुस आखिरी यस्तो राजनिती किन हुँदै छ एउटा जाबो गेटमा ??
स्मरण रहोस युवाहरुले जिल्ला बनाउछौ भनेर जुट्न तयार भइसकेका छन ।
सल्यान गेट निर्माण अभियान बिशेष
इतीहासमा सल्यान ! (तस्बिरहरु सहित)
सल्यान जिल्लाको ईतिहास झल्काउने सानो प्रयास ।
जिल्लाको सानो इतीहास !
वि.सं.१८६९ भाद्र ३ गते मंगलबारका दिन नेपाल एकिकरण अभियान भित्र परेको तत्कालिन बाईसे राज्य अन्तर्गतको सल्यान जिल्लाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण देखिन्छ । वि.स १८२३ माघ २५ गते सल्यानी युवराज रणभिमशाहसँग श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नी छोरी विलासकुमारीको वैबाहिक सम्बन्ध स्थापना गरी छिल्ली बिजौरी देखि पश्चिम दाङ्ग क्षेत्र कुशविर्ता नै प्रदान गरिदिएका दिए। पृथ्वीनारायण शाहको सल्यान प्रतिको नीति कायम राख्दै भिमसेन थापाले पाल्पा विजय गरेपछि सल्यानका विषयमा रुची बढेको थियो। राणकालिन अबस्थामा सल्यान जिल्ला अन्तर्गत हालको रुकुम, रोल्पा र दाङ जिल्लाको अधिकतम भाग यस जिल्लामा नै थियो। यसको क्षेत्र पनि ठूलो थियो चौथो दर्जाको बडाहाकिमको दरवन्दी थियो। #राज्य_स्थापना वि.सं. १८०२-१८०८ मा जुम्लाका राजा सुदर्शन शाहको ताम्रपत्र अनुसार जुम्ला राज्यमा ११ वटा पर्वत र ११ वटा नदी भएकाले जुम्लालाई सुरुवात देखी नै बाइस पाखा नामले चिनिने तथा जुम्ली जनतालाई बाइस पख्याली भनिन्थ्यो। सो समय जुम्ला राज्यको प्रभावमा रहेको र जुम्ला राज्यलाई वार्षिक …
' सल्यान गेट ' निर्माण अभियान !
कस्तो हुने छ त सिमानामा युवाहरुले बनाउने सल्यान गेट ? सल्यान गेट/सल्यान प्रबेश द्वारसल्यान र दाङको सिमानामा बन्ने गेट हो ।यो गेट सल्यानको मौलिक कला संस्कृति र सम्पदा झल्किने खालको बनाइने छ । गेटको दुईवटा पिल्लरमा सल्यानका मुख्य पर्यटकिय सम्पदाको स्केच कुदिने छ । गेट निर्माण हुने लोकेशनमा पर्ने बाटोलाई अलिकती चौडा बनाइ त्यहा सल्यानका पर्यटकिय चिनारी अङ्कित ठुलो होरिङ्ग बोर्ड पनि राखिने छ । यसका साथै गेट निर्माण हुने ठाउँ नजिकै एउटा मन्दिर , एउटा प्रतिक्षालय अनी सम्भव भएसम्म एउटा पानीको धारो पनि बनाइने छ ।